चक्रब्यूमा बजेट, बजेट ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना वढे संगै 2051 साल दोहोरिने स्थिति...... - Babal Khabar
काठमाडौँ / सरकार परिवर्तन भइरहने र तोकिएको मितिमा बजेट नआउने भएपछि संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकार फेर बदल हुने जादाँ बजेट ल्याउने काम असोज कार्तिकसम्म धकेलिन थालेपछि संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
बजेट ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको नेतृत्वको सरकार काम चलाउको अवस्थामा छ ।
एउटा सरकार काम चलाउन र अर्को सरकार बनिसकेको छैन् । यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने वाध्यता छ । जेठ १५ गतेसम्म जो अर्थमन्त्री हुन्छ, त्यसैले बजेट ल्याउनु पर्ने अर्थमन्त्रालयका पूर्व सचिव ले बताए ।
‘जेठ १५ गतसम्म अर्थमन्त्री भएर जुन व्यक्ति कुर्सीमा बस्छ, त्यसैले बजेट ल्याउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन नभए अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउनु पर्छ, यदी नयाँ सरकार गठन भयो भने नयाँ अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्छ ।’ जेठ १५ गते भन्दा पछि बजेट ल्याउछु भनेर छुट संविधानले नदिएको पनि उनले प्रष्ट पारे ।
ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउको स्थितिमा पुगेपछि राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले वैशाक ३० साँझ ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दावी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन् ।
यता, नेपाली काँगेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बढेको छ ।
नयाँ बन्ने सरकारको अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । बजेट निर्माणका लागि अब १६ दिनमात्र बाँकी छ । यति छोटो समयमा बजेट निर्माण गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा बजेट निर्माणमा प्रभावित हुन नहुने पूर्वअर्थ सचिवले बताए । ‘जेठ १५ गते पूर्ण, अपूर्ण वा एक तृतियांश जे भने पनि बजेट ल्याउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बजेट नयाँ आउने सरकारलाई चित्त बुझेन भने अर्को बजेट ल्याउन सक्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गिय गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको बजेट चित्त नबुझेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अर्को बजेट ल्याएको स्मरण पनि उनले गराए । ‘गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेटलाई लत्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो स्थिति आएमा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन सक्छ । जेठ १५ गतेसम्म रहने सरकारले पनि बजेट त ल्याउनै पर्छ ।’
तत्कालीन समयमा मनमोहन अधिकारीले पुरानो बजेटलाई वास्ता नगरी नयाँ बजेटमा बृद्धा भत्ता दिने गरी नयाँ बजेट ल्याएका थिए । जुन बजेट अहिले पनि त्यतिकै लोकप्रिय भएको पूर्वअर्थ को भनाइ छ ।
उद्योग व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमश, अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडालगायतले आगामी बजेटका लागि लिखित रुपमा सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत अर्थमन्त्री पौडेललाई लोकप्रीय बजेट ल्याउन दवाव दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा भक्ता बढाउने गरी बजेट ल्याउने उद्घोष गरिसकेका थिए । बृद्ध भत्ता, एकल महिला, अपाङलगायतको भक्ता बढने अनुमान गरिएको थियो । तर, कर्मचारीको भत्ता भने गत वर्ष नै बृद्धि भएकाले यस पटक बढ्ने सम्भावना देखिएको थिएन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याएको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कडा आलोचना गरिएको थियो ।
Prevखनाल-नेपाल समूहले परिस्थिति हेरेर मात्र भावी सत्तासमीकरणबारे निर्णय गर्ने
nextखुसीको खबर !! रुसले बनायाे एक डोज लगाए पुग्ने यस्तो खोप, जुन ५० लाख डोज नेपाल ल्याउने तयारी हुदै